metoo အများကြီး? ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုဒဏ္acceptanceာရီများလက်ခံခြင်းကိုခုခံတွန်းလှန်ရာတွင်အွန်လိုင်းမီဒီယာကိုလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း၏အခန်းကဏ္ - (Your Brain On Porn)
J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။ 2019 အောက်တိုဘာ 22; 77: 59-69 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2019.10.005 ။
Mae C1, Schreurs L ကို2, ဗန် Oosten JMF3, Vandenbosch L ကို4.
586 Flemish ဆယ်ကျော်သက်များတွင် metoo- လှုပ်ရှားမှုဆီသို့သဘောထားအပေါ်လေ့လာပါ။
မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုလိင်မှုပြုခြင်းသည် metoo-movement ကိုခုခံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်မှန်ကန်သောဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုသည်အွန်လိုင်းမီဒီယာကျင့်သုံးမှုများကိုလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အင်တာနက်ပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်များရရှိခြင်းတို့သည်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်အရဆက်ဆံမှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းယုံကြည်ချက်နှင့်ဆက်စပ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္acceptanceာရီများလက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်သုတေသနကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအွန်လိုင်းမီဒီယာအသုံးပြုမှု၊ လိင်အရသဘောထားများကိုတိုင်းတာသော Flemish ဆယ်ကျော်သက် ၅၆၈ ယောက် (၁၅-၁၈ နှစ်၊ Mage = ၁၆.၄၊ SD = .568, ၅၈.၃% မိန်းကလေးများ) အကြားတွင်စက္ကူနှင့်ခဲတံဆိုင်ရာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ နှင့် objectification ဖြစ်စဉ်များ။
ရလဒ်များအရလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသည်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်များမရရှိခြင်းသည် metoo-movement ကိုပိုမိုခုခံခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအဖြစ်အဓမ္မပြုကျင့်မှုများအားလက်ခံခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Self- objectification အဆိုပါဆန်းစစ်ဆက်ဆံရေးအတွက်တရားဝင်ဖျန်ဖြေအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျား၊ မရေးရာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုသည်အဆိုပြုထားသောဆက်ဆံရေးကိုအလယ်အလတ်မထားခဲ့ပါ။
ဆယ်ကျော်သက်များသည်လိင်အယူဝါဒဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများမည်သို့တိုးတက်လာသည်နှင့်ပိုမိုတိကျစွာဆိုရလျှင်၊ လိင်မှုဝါဒကိုတိုက်ဖျက်ရန်ခေတ်မီလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်ယုံကြည်မှုများ၊ လက်ရှိလေ့လာမှုအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကြောင့်လိင်ဆိုင်ရာအရငြင်းဆန်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးဤလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ပိုမိုခုခံနိုင်သည်။
သော့ချက်စာလုံးများ - #Metoo; မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ objectification; အဓမ္မပြုကျင့်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ လူမှုမီဒီယာ